Ebere na Obelisk na-enweta Asphalt - RayHaber
HomeTurkeyMediterranean Region33 MersinMercury na Obelisk ruru Asphalt
12 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 33 Mersin, Mediterranean Region, Akụkọ Asphalt, General, Ụzọ Awara Awara, Turkey 0
Mercury na obelisk na korota
Mersin mepere emepe rụchara ọrụ asphalt n'ime ime obodo na Mpaghara Mịnịstrị. Metropolitan, Civanyaylağı na n'etiti agbata Camili Dikilitaş agbataobi Hürriyet Street na Kayalar Street edozila nsogbu asphalt na-eche ụmụ amaala ogologo oge. Ngụkọta XIIX dị egwu nke asphalt na-arụ ọrụ na mpaghara abụọ.
Obodo Mersin mepere emepe dozie nsogbu niile dị n'ime ime obodo site na sọlfọ rue akụrụngwa. Ndị otu ejikọtara na Directorate of Metropolitan Road Construction Mmezi na Mmezi Ngalaba rụchara ọrụ asphalt rụrụ na Hürriyet Caddesi na Kayalar Caddesi n'etiti Akdeniz District Civanyaylağı na Camili Neighborhoods na Dikilitas Neighborhood. Ngụkọta XIIX dị egwu nke asphalt ọrụ rụrụ na mpaghara.
Ilar Ha rụrụ ọrụ anyị n'ụzọ dị ịtụnanya ”
Site na ntinye uche nke ndị bi na ntuzi aka nke Mersin Metropolitan Ọchịchị Mayor Vahap Seçer, a dozi nsogbu nsogbu ndị agbata obi na-enwebeghị ike inweta ọrụ kemgbe ọtụtụ afọ.
İsmail Toker, onye bụ onye mukhtar maka oge 2 na Civanyaylağı Agbata Obi, kwuru na a na-edozi nsogbu akụrụngwa na mpaghara na ha na-eche 1 kemgbe afọ, wee sị, ık Anyị etinyela akwụkwọ arịrịọ. Na nzukọ ikpeazụ nke Mgbakọ ahụ, anyị zigaraara Mayor anyị nke Mersin Obodo ukwu Maazi Vahap Seçer. Ha ekwughi na Sọnde-Sọnde, ha bịara ma mee ka ụzọ anyị dị ebube. ”
Ebe a na-eli ozu nke Civanyaylağı kwukwara na ọrụ ahụ bụ Muhtar Toker, "Onye isi obodo Vahap Obodo ukwu, 'Mukhtar bụ ogwe aka nri m, ihe muhtar na-eme ihe m kwuru' ka o kwuru. O mere ihe anyị chọrọ. Ka Chukwu nwee ike ..
Walkstọ njem mgbede nwere ntụsara ahụ ugbu a
Mahmut Yaman, onye isi obodo Dikilitas, rụtụrụ aka na ọrụ ahụ bịara n'oge na-adịghị anya mgbe ntuli aka ahụ kwuru, "Ka Allah nwee obi ụtọ na onye isi obodo Mersin Vahap Seçer na ndị ọzọ. Anyị siri, 'Anyị ga-atụ anya na ọrụ a ga-eme ma ọ dịkarịa ala otu afọ'. Mana ọrụ ahụ rutere n’oge anyị tụrụ anya ya. Ka ndị agbata obi anyị na-aga n'okporo ụzọ a, ụkwụ ha na-akụ. Ugbu a, ha na-aga n'okporo ụzọ dị ka ude. ”
Muhtar Yaman mere ka ọ pụta ìhè na a na-edozi nsogbu nke nsị mmiri na mpaghara.
Ụzọ okporo ụzọ Gökbel ga-enweta ọkpụkpụ 07 / 08 / 2014 Ụzọ okporo ụzọ Gökbel nwetara: Ejiri Alanya Municipality malitere na Gökbel Road. Alanya Municipality, 'Gökbel Plateau Festival Wrestling Festival' n'ihu okporo ụzọ Gökbel ka usoro 11 kilomita mechara rụọ ọrụ nchịkọta. Mgbe Gökbel na Çökele plateaus, mmepe okporo ụzọ na ngwongwo Öteköy, Asmaca, Dereköy, Türktaş na agbụrụ Mahmutseydi nọgidere na-arụ ọrụ ndị ọkachamara na ndị ọchịchị na mpaghara 2 kilomita nke okporo ụzọ Sıçanlı Plateau rụrụ ọrụ mmepe okporo ụzọ. Mayor nke Alanya Adem Murat Yücel kwuru na ha eburu ụzọ rụọ ọrụ na Öteköy Plateau na Çeltik Plateau Road.
Okporo ụzọ ankara na mmanụ aṅụ 03 / 11 / 2014 Okporo ụzọ ankara na ngwakọta na-enweta: Obodo Ankara obodo ukwu, ulo oru nchikota ulo oru. Obodo ukwu ahụ na-aga n'ihu na-akwadebe isi obodo ahụ na kpofụ ọkụ si n'ógbè ndị agbakwunyere agbakwunyere n'ókè ya ruo n'ókè ndị dịpụrụ adịpụ (obodo). Ugbo ala, uzo uzo, uzo ndi mmadu bu ndi mmadu, ndi na-ahutaghi ihe ndi ozo ruo otutu afo, bu ndi Ankara Metropolitan Munved, ndi ha na adighi nma. Mayor Melih Gökçek, "Anyị kwere ná ntuli aka. 'Anyị ga-akwadebe mpaghara ọhụrụ na obodo ndị nwere akwara'. Anyị na-emezu nkwa anyị n'otu n'otu. Ọrụ anyị na-aga n'ihu ngwa ngwa. Na mpaghara ọhụrụ ndị na-elekọta ọrụ ugbo na anụ ọhịa hay
Obodo obodo Solhan bibiri 30 / 09 / 2014 Obodo nke Solhan nwetara ngwakọta: Kırık Village na Tarhan Village malitere maka oge mbụ. Ndị nwe ụgbọala gosipụtara afọ ojuju ha, ndị obodo kwuru na ha nwere obi ụtọ. Asmakaya N'uzo ndi otu obodo malitere n'afọ gara aga n'agbata Elmasırtı Village na Tarhan Village. N'ihi ya, obodo Tarhan na nke mbụ ya na okporo ụzọ gbawara agbagha zutere ngwakọta. Ndị nwe ụgbọala na-egosipụta afọ ojuju ha mgbe ndị obodo kwuru na ha nwere obi ụtọ. Ụmụ amaala, "Anyị anọwo na ájá ruo ọtụtụ afọ, na-ekele ịdị mma obodo anyị mere, anyị nwere afọ ojuju. Okporo ụzọ anyị. Anyị na-ekele onye ọ bụla nyere onyinye N'etiti Tarhan Obodo na Asmakaya Village ...
Oge mbụ Mushta na-abanye na okporo ụzọ nke obodo 17 / 10 / 2014 Mbụ oge nkwonkwo mkpịsị Alụta Village Road Hot Asphalt: mus Special Provincial Administration Secretary General, 1.7 kilometa ụzọ n'ime obodo Milky ọkụ korota kpuchie. Ngwongwo na-ekpo ọkụ na obodo Sütlüce; Gọvanọ Vedat Büyükersoy na odeakwụkwọ ukwu nke nchịkwa gọọmentị pụrụ iche Şeyhmus Yentür gara. Mgbe ahụ, obodo nta nke Sütlüce Büyükersoy Gọvanọ, ebe obodo ahụ na ndị mmadụ na-akparịta ụka. Gọvanọ Büyükersoy, na ndị na bi n'ime obodo nke ọrụ echiche iru quality n'obibi ndụ dị ka ụmụ amaala bi n'otu obodo, kwuru, sị: "Ihe mbụ ụbọchị anyị bịara ụlọ ọrụ, anyị na-anọgide na anyị na-arụ ọrụ na a lekwasịrị kemgbe. Village kwuru ejide n'ógbè oge anyị nyere N'ezie ...
Fatsa OSB Na-aga Gburugburu Egwurugwu 29 / 11 / 2018 N'ịga n'ihu na-eme ka ihe ndị a na-eme na akụ na ụba nke mpaghara mmepụta ihe na-eme ka ụba akụ na ụba Ordu, Obodo Metropolitan wetara Fatsa Organed Industrial Zone ka ọ bụrụ ihe na-ekpo ọkụ. Haziri Industrial Mpaghara kwuru na idé nke Fatsa Army Mayor Peters Tekintaş, "-ejikọ ndị a haziri ahazi Industrial Mpaghara na akara na na-achọ n'aka anyị ahịa n'okporo ụzọ na otú anyị si na 1800 m ogologo na-ekpo ọkụ, anyị gafere korota," ka o kwuru. "Anyị kweere na Industrial mpaghara nke guzo" Bishọp Municipality site Fatsa Haziri mere na Industrial Mpaghara, na-enye ihe ọmụma banyere ihe na-ekpo ọkụ korota ọrụ President Tekintaş, "Fatsa, idé, anyị ga-akwadokwa-achọ ọrụ n'ọrụ na ndị mmadụ na-emeghe ụzọ Haziri Industrial Mpaghara na ọnọdụ nke ego. Army ...
Obodo Altınordu Nwere Egwurugwu Egwu 07 / 07 / 2019 Obodo Ordu Metropolitan, Altınordu akwukwo nri na Mkpụrụ Okpokoro ebe obibi dị ka ọkụ kpara ọrụ e mere. Mayor nke Obodo Ordu Obodo Ukwu Mehmet Hilmi Guler kwuru, sị, "Tupu ịbute ọrụ ahịa nke ala, kwuru na a ghaghị imeghasị ihe e ji ekpofu ọkụ dị na ya, anyị kwekwara nkwa. Hal ga-enweta ezigbo ahịa," ka o kwuru. Obodo ukwu dị na Ordu na-elekwasị anya na akwara ndị na-ekpo ọkụ na-arụ ọrụ na mpaghara etiti na mpaghara ụzọ. Mgbe ọmụmụ nke Ngalaba Ụgbọ njem na-arụ, ógbè Altınordu na-arụ ọrụ akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi na ụlọ akwụkwọ ahụ na-arụ ọrụ na-ekpo ọkụ. Iji mezuo nkwa ha na steeti azụmahịa ...
Ebube Mbụ nke Ewuru na Kumlucada 02 / 06 / 2014 Akpa Mbụ nke Afọ Akpụrụ na Kumluc: A malitere ọrụ nchịkọta mbụ na mpaghara Kumluca, nke gbasaa ókèala ya na Iwu Metropolitan Municipality, na onyinye nke Antalya Metropolitan Municipality. Ógbè Kumluca n'ime ókèala nke agbata obi tupu obodo ahụ na obodo nta nke obodo ukwu dị gburugburu ebe obibi ahụ ga-eme na 120 puku square mita nke ọrụ nchịkọta. N'okwu a, Kumluca Mayor Hüsamettin Çetinkaya nyochara ọrụ asphalting ahụ malitere. President Çetinkaya, a ga-anọgide na-arụ ọrụ ahụ n'oge okpomọkụ. Çetinkaya kwupụtara na ha nọgidere na-arụkọ ọrụ nke ọma na Menderes Türel, Mayor nke obodo ukwu, ma kwuo na ọrụ ndị a na-ahụ ọkụ ga-anọgide na-aga ngwa ngwa.
Mgbanwe nke obodo ga-egbochi ya 01 / 07 / 2014 A ga-etinye usoro mgbanwe nke obodo na ngwakọta: 6 ga-ebibi n'ime mmepe nke mgbanwe obodo. a malitere ịmepụta simenti brik na-acha akwụkwọ ndụ site na 500 nde tọn ụlọ mkpofu ka a tọhapụ ya site na ebe obibi nde ise. Ministụ nke gburugburu ebe obibi na obodo mepere emepe ngwa ngwa nke mbụ maka mmepụta brik na-acha akwụkwọ ndụ na ciment na-acha akwụkwọ ndụ site na mkpofu ụlọ. Ihe oru a bu iji kpochapu ihe mkpochapu site na mgbanwe ndi ozo site n'inwe ihe ize ndu maka gburugburu ebe obibi na ahuike mmadu na ime ka ha baa n'uwa. E mepụtara 2013 Waste Assessment Waste Assessment iji kwụsị nsogbu gburugburu ebe obibi na-akwatu ma kwatuo ihe mkpofu, iji nye aka na nsogbu nsogbu nchekwa na iji wepụ ihe mkpofu n'ime akụnụba. Owuwu na usoro ihe omuma ...
Otu Na-enweghị Mkpa Na-enweghị Asphalt 18 / 07 / 2014 Otu Na-enweghị Ntọhapụ Na-enweghị Asphalt: Akkuş, nke bụ nanị ógbè ebe a na-etinye akwụkwọ ngwọta ọkụ na ógbè Ordu, ga-ekpuchi ya na okpukpo ọkụ n'oge okpomọkụ. Okporo ụzọ Samsun 7. Onye isi mpaghara mpaghara Mehmet Onye isi Akkus Mayor Isa Demirci gara leta ya, Akkus gbanwere echiche na ụzọ okporo ụzọ dị n'ógbè ahụ. Okporo ụzọ Samsun 7. Onye isi mpaghara mpaghara Mehmet Leein, Ordu, Akkus bụ nanị ógbè nke ọkụ na-ekpo ọkụ, ha kwuru. N'ịkọwa na ọ gaghị ekwe omume ịmeghe ụzọ Akkaş na nke a, Onye isi mpaghara Regional Çetin kwuru, ık Anyị enyochala ma a ga-esi ụzọ nkewa kewaa, mana ụzọ ugbu a adịghị adaba maka ịmegharị ụzọ ugbu a ...
Akara mkpuchi na agbaze efere 13 / 08 / 2014 Gbazee korota elu ọgwụgwọ: ọkụ ikuku na-agbaze n'ihi korota ụzọ n'elu mkpuchi na Tokat yapıldı.tokat Erbaa, Niksar, Reşadiye na Başçiftlik distrikti gbazee ọnụ na okporo ụzọ ejikọta na-ekpo ọkụ ikuku ebiwo a ike korota nke drive. The ikpeazụ ìgwè na-akpụ akpụ na-pitch ụzọ ha na-ekpuchi gravel n'elu mkpuchi mere ser. Car ọkwọ ụgbọala na-agba ihe mberede mere nke gburu korota na-wụsara, mgbe bouncing nkume si na taya nke ugbo ala na-atụ aro na mmebi nke windo nke ugbo ala.
Ụzọ okporo ụzọ Gökbel ga-enweta ọkpụkpụ
Okporo ụzọ ankara na mmanụ aṅụ
Obodo obodo Solhan bibiri
Oge mbụ Mushta na-abanye na okporo ụzọ nke obodo
Fatsa OSB Na-aga Gburugburu Egwurugwu
Ebube Mbụ nke Ewuru na Kumlucada
Mgbanwe nke obodo ga-egbochi ya
Otu Na-enweghị Mkpa Na-enweghị Asphalt
Akara mkpuchi na agbaze efere